Lwesihlanu 26 Mashi 2021
Indawo Yokuhlala I-ResoNet Pavilion ihanjiswa ngabakwaSinan Mansions eShanghai ukugubha unyaka omusha waseChina 2017. Siqukethe indawo yokuhlala yesikhashana kanye nesibani esisebenzayo se-LED "resonet" exhunywe ngaphakathi kwangaphakathi. Isebenzisa amasu we-Low-Fi ukubona ngeso lengqondo imvamisa ye-resonance eyenzeka endaweni yemvelo, ngokuxhumana komphakathi nezinto ezungezile ezitholwe yinetha le-LED. I-Pavilion ikhanyisela indawo yomphakathi ekuphenduleni okushukumisayo. Ngaphandle kwezivakashi kungafika ukwenza izifiso zoMkhosi Wase-Spring, zingasetshenziswa futhi njengesigaba sokusebenza.
Ihhovisi Lenkonzo Umqondo wephrojekthi "ukuxhumanisa ihhovisi nedolobha" usebenzisa imvelo. Indawo isendaweni lapho kubukwa khona idolobha. Ukuyifeza kufakwe isikhala somumo okwakhiwa ngawo, okudlula esangweni lokungena kuze kube sekupheleni kwendawo yehhovisi. Umugqa wokhuni ophahleni negebe elimnyama elifakelwe izibani nokulungiswa komoya kugcizelela indlela eya edolobheni.
Lwesithathu 24 Mashi 2021
Isitulo Sohlalo Siyizinhlobo Isihlalo esinesihlalo seLollipop siyinhlanganisela yemilo engafani nemibala yemfashini. Ama-silhouette alo kanye nezinto zombala kwakudingeka zibukeke njengama-candies, kepha ngasikhathi sinye isihlalo sendawo kufanele silingane phakathi kwezitayela ezihlukile. Ukwakheka kwe-chupa-chups kwakha isisekelo semikhono yezandla futhi emuva nesihlalo kwenziwa ngendlela yamaswidi eklasikhi. I-Lollipop armchair yenzelwe abantu abathanda izinqumo ezinesibindi nemfashini, kepha abafuni ukuyeka ukusebenza nokududuzeka.
Iphaneli Yama-Acoustic Panolstered
Iphaneli Yama-Acoustic Panolstered Okufingqiwe yethu bekuwukuhlinzeka futhi kufaka inqwaba yamaphaneli enziwe ngendwangu ama-Acoustic osayizi abahlukahlukene, ama-engeli nobumo. Okokuqala prototypes babone ushintsho ekwakhiweni kanye nasezindleleni ezibonakalayo zokufaka nokumisa le paneli kusuka odongeni, ophahleni nangaphansi kwezitebhisi. Kungalesi sikhathi lapho sabona khona ukuthi izinhlelo zamanje zokulenga zamaphaneli ophahla zazinganele izidingo zethu futhi sazakhela ezethu.
Msombuluko 22 Mashi 2021
Sonto 21 Mashi 2021
Indawo Yokudlela Kunenqwaba yalemiklamo exubeneyo yesimanje emakethe lapha eChina namuhla, imvamisa isuselwa kumiklamo yendabuko kepha ngezinto zokwakha zanamuhla noma izinkulumo ezintsha. I-Yuyuyu yindawo yokudlela yase-China, umqambi wakhe indlela entsha yokuveza ukwakheka kwase-Oriental, ukufakwa okusha okuhlanganiswe imigqa kanye namachashazi, lawo anwetshwa kusuka emnyango kuya ngaphakathi kwendawo yokudlela. Ngokushintsha kwezikhathi, ukwazisa kwabantu ngobuhle nakho kuyashintsha. Ngomklamo wesimanje WaseMpumalanga, ukuqanjwa kwemvelo kubaluleke kakhulu.
Indawo Yokuhlala Ihhovisi Lenkonzo Isitulo Sohlalo Siyizinhlobo Iphaneli Yama-Acoustic Panolstered I-Curling Iron Indawo Yokudlela